Isu tiri fekitori, ine anopfuura makore gumi nematatu ruzivo muindasitiri ye mosaic.Fekitori yedu inovhara 30000 square metres, ine vashandi vanopfuura mazana maviri.Sezvo isu tiri fekitori, tinogona kukupa mutengo wakaderera, pasina kutengesa kambani komisheni.
Chii chaunokwanisa kugadzira?
Kukwanisa kwedu kugadzira 20000sqm mosaic mwedzi wega wega.
Munganditumire makatalog enyu here?
Ehe, kana iwe uchida mamwe mafoto e mosaic kubva kukambani yedu, ingo titumire email kunetracyfs@vip.126.com, tichakutumira mabhuku, unogona kusarudza zvinhu zvemosaic zvaunoda kubva pawebhusaiti yedu kana mabhuku, tobva takupa mutengo wakanakisa.
Ndingawana sampuli dzemahara here?
Ehe, kana iwe uchigutsikana nemutengo wedu uye mosaic pics, tinogona kukutumira emahara samples tisati tapedza odha.Asi mari yekutumira inobhadharwa nedivi rako.
Mitemo yedu yekubhadhara ndeye 30% TT sedhipoziti, muripo wekubhadhara usati watakura cargos.Kana isu tinogona kuita L / C pakuona.
Yedu MOQ ndeye 30 sqm chimwe nechimwe chinhu.
Nguva yedu yekugadzira ingave mazuva makumi maviri nemashanu mushure mekugamuchira dhipoziti.
Ndinogona kukutumira dhizaini yedu uye iwe wogadzira zvinoenderana nayo?
Hungu, tinogona.Unogona kutitumira mapikicha kutanga, mamwe madhizaini akareruka isu tinogona kuiburitsa zvinoenderana nemifananidzo.Zvakare, iwe unogona kutitumira iyo chaiyo sampuli nemutumwa, saka isu tinokwanisa kuita chaizvo zvakafanana neiyo chaiyo sampuli.
Unoitumira sei kana ndikatenga zvishoma chete?
Yedu MOQ ndeye 30 sqm chinhu chimwe nechimwe, diki diki rakadaro isu tinogona kurongedza mu pallet, nezve 0.5CBM, kuendesa iyo LCL kutumira negungwa.Kana iwe uine zvimwe zvinotakura zvinotakura muChina, isu tinogona zvakare kutumira mitoro yedu kune yako imwe cargos 'nzvimbo kuti isanganise mumudziyo.
Kana ndikaisa maodha anoenderera, unoratidza sei batch mosaics shades diki musiyano?
Isu tinochengeta chidimbu chemuenzaniso kubva kune yega batch kugadzirwa, saka nguva inotevera kana iwe uchiirongedza zvakare, isu tichaita zvakangofanana nekekupedzisira batch, nenzira iyi, mimvuri ingangove yakafanana.